Zvinorevei Sakura? | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulZvinorevei Sakura?
Nhasi, Başakşehir Çam uye Sakura City Hospital vakapinda zvizere nekutora chikamu kweMutungamiri Recep Tayyip Erdoğan uye Prime Minister weJapan Shinzo Abe. Chipatara, icho chinokwanisa kutora zviuru makumi matatu nezvitatu kunze uye kushanda nemazana mashanu, chine makamuri emakumi manomwe nemakumi mapfumbamwe nemashanu emakamuri ekushanda, matatu acho ari mahybrid. Başakşehir Çam uye Sakura City Hospital, inoshanda mumapazi zana nemakumi manonwe, ine mana ehutano hwekukurumidzira: Vakuru, Mwana, Trauma uye Obstetrics.
Iyo HOSPITAL INODA KUBATSIRA BASA MUVANHU VEMABHUKU uye VAVE NEMAHARA ECHITSAUKO EMERGENCY
Nemakiriniki e725 ekunze kwekunze, makamuri makumi mapfumbamwe nemashanu ekushanda, matatu acho ari mahybrid, chipatara chinokwanisa kugamuchira zviuru makumi matatu nezviuru zvevarwere vanovhiya uye kuita 3-chaiyo mabasa. Chipatara ichi, chinoshanda mumatavi zana nemakumi mana evana nevakuru, chinopa kuongororwa uye nzvimbo dzekurapa zvine michina yekurapa yepamusoro uye nemidziyo. Başakşehir Çam uye Sakura City Hospital ine yakakwana ye90 mibhedha, makumi matanhatu nematanhatu emibhedha yekuchengetedza yakasimba. Mukati memamiriyoni zviuru makumi matatu emamirimita yakavharwa nzvimbo, kune mana ehutano hwekukurumidzira: Vakuru, Mwana, Trauma uye Gynecology. Kune nzvimbo makumi maviri nenomwe dzekucherekedza, uko kune makamuri ekumanikidza kwakashata uye panogona kuwanikwa mamiriro ekukurumidzira, mumadhipatimendi ekukurumidzira, ane zvikamu zvekurapa uye zvekurapa kushandira varwere zviuru zvinomwe zuva nezuva.
Nei chipatara chakanzi Sakura? Vagari vemo vakatanga kuongorora kunzwisisa kwaSakura nekuda kuziva. Saka zvinoreva kuti Sakura anorevei, nei raive zita rechipatara richangovhurwa Sakura?
Turkish, iro izwi reJapan, rinoreva kuti "Cherry Blossom". Sakura imhando ye "Cherry Muti" iyo isingabereki michero. Iro ruva reimwe yemiti mishoma ye genus Prunus. Sakura yakakosha kwazvo mutsika yeJapan uye ndeimwe yemhando dzenyika zviratidzo zveJapan.
Ruva iri rinovhura muvhiki yekupedzisira yaMarch uye vhiki yekutanga yaApril, uye muJapan nguva ino inoonekwa seyakaoyera Zvakawanda zvekuti "Sakura Chimiro" chinopihwa mushure memamiriro ekunze. Iyi nguva iyo maruva anotumbuka inguva iyo Japan inogamuchira vashanyi kwazvo
NEI ZITA RAZVO HOSPITAL PAKUTI SAKURA?
Mutungamiri Recep Tayyip Erdogan vakataura Mugovera: "Takatumidza chipatara ichi kuti Başakşehir Çam uye Sakura City Hospital." Takati Pine anofanira kutimiririra. Sakura akadaro Japan. "
Chikamu chekutanga chechipatara chakavhurwa musi waApril 20. Nhasi vamwe vasara vachapinda mukushandira.
Vavaki vechipatara vakatanga kuvaka pane chirimwa ichi muna 2016 maringe neruzivo rwuri munzvimbo ino Renaissance Holding, nebazi rezvehutano rakagadzirwa nePublic Private Partnership modhi ndiyo yechitatu yeTurkey yakakura mari yekudyara chirongwa.
Chipatara ichi, icho chine nzvimbo yemamirioni mativi emamirimita, chine zviuru zviviri zvemakumi matatu nemakumi matatu nemakumi matatu nemakumi matatu nemakumi mashanu nemubhedha
Meya Kadir Topbas: Iti Tiri Metro
Chii Chinonzi Dhiverlessless Metro Door Warning Lights Mean?
The Revolution in Public Transport GPS neKamera Kuuya, Saka Zvinorevei?
Zvinoreva zvepamusoro-chetheni uye mhemberero zvinoreva kuBursa
Binali Yildirim: Motokari haigoni kunzwisisa kana pane Marmaray
Vashandi veYHT vanokwazisa kumira kwekunyevera
Kubatana kweTÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ naTÜVASAŞ
Chii chinorehwa neStable yeDingo iyo yave iri Rosewood kune yedu Mutauro?
GPS uye Nguva yeKera Munharaunda Yekutakura Kwevanhu Inotanga Saka Saka Inorevei?
Unorevei kuti Metro Keçiören yadarika?
Kuva nesimba muna Konya kunoreva kuva nesimba kuSarajevo
Motokari inoreva simba uye kuzvimirira
Customization zvinoreva Kudzidzisa Njodzi!
Traffic monster uyo asingadi kubhadhara paharaunda
Yemazuva ano cableway kuuya kuBursa
Motokari Inosvika kuAnkara Castle
Bhophorus iri pakati peAlunizade neEtiler
40 chitima chitsva chakaiswa chinouya kune İZBAN
Ngoro Yakauya KuInkumu Beach